Safal Khabar - घनश्याम भुषालसँग प्रधानमन्त्रीको ‘गुपचुप’ वार्ता !
घनश्याम भुषालसँग प्रधानमन्त्रीको ‘गुपचुप’ वार्ता !
६ वर्षपछि वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता भुषालबीच तीन घण्टा लामो छलफल
शुक्रबार, २७ असार २०७६, ०८ : ३८
काठमाडौं । हुन त राजनीतिमा लागेका नेताहरुका बीच भेटघाट हुनु, कुराकानी हुनु नौलो होइन । अझ आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँगको भेटघाट त सामान्य नै हुन् । तर पनि केही भेटघाट भने निक्कै अर्थपूर्ण हुन्छन र त्यसको कारणका विषयमा सञ्चारमाध्यमले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै एउटा भेटघाटको अहिले चर्चा छ, सत्तारुढ दल नेकपाभित्र । प्रधानमन्त्री केपी ओली र स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुषालका बीचमा गत शनिवार तीन घण्टा लामो गुपचुप वार्ता अहिले नेकपाभित्र चर्चामा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका कटर आलोचक भुषाललाई प्रधानमन्त्री स्वंमले वालुवाटार बोलाई तीन–तीन घण्टा लामो भेटघाट र कुराकानी गरेका हुन् । यो भेटघाट यस अर्थमा पनि नेकपाभित्र चर्चामा आएको छ की, भेटमा भएका छलफलका विषयमा दुवै पक्षले औपचारिक मुख खोल्न चाहेका छैनन ।
तर भेटको पुष्टि भुषाल र उनी निकटले नगरेपनि प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयले भने गरेको छ । ‘उहाँहरु (प्रधानमन्त्री र भुषाल)बीच तीन घण्टा लामो वान अन वान वार्ता भयो, त्यो पनि निक्कै हार्दिकतापूर्वक,’ प्रधानमन्त्री ओलीका एक सल्लाहकारले सफलखबरसँग भने,–‘पछिल्लो राजनीतक घटनाक्रम, पार्टीभित्रको बन्दै गएको राजनीतिक समिकरण र एक आपसमा दुई नेतालाई हेर्ने र बुझ्ने ब्यक्तिगत सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले घनश्यामजीलाई वालुवाटार निम्ताउनुभएको थियो ।’
खासमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता भुषालबीच एकै पार्टीमा रहेपनि समान्य औपचारिक कार्यक्रममा देखभेट हुने, नमस्कार आदानप्रदान हुने गरेको भएपनि छुट्टै एक्लाएक्लै भेटवार्ता नै नभएको ६ वर्ष भएको थियो ।
६ वर्षपछि त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै विशेष आग्रहमा तीन घण्टा लामो यो छलफल भएपछि भने यो नेकपाभित्र चर्चाको विषय बन्न पुगेको हो ।
२०७० माघमा तत्कालिन एमाले संसदीय दलको निर्वाचन अगाडी मात्र यी दुई नेताका बीचमा यस्तै लामो सम्वाद भएको थियो । त्यसयता सम्वादमा यी दुबै नेता नरहेको बताइन्छ ।
शनिवारको छलफलपछि भने अब भेटघाट र सम्बन्धलाई टाढिदो नबनाई निरन्तर नजिक ल्याउने गरी भुषाल वालुवाटारबाट उठेका थिए । प्रधानमन्त्री स्वंमले आफ्नै तहबाट बेलाबेला भेटघाटलाई निम्ताईरहने भुषाललाई उठ्ने बेला बताईएको वालुवाटार स्रोतले बतायो ।
तीन घण्टा लामो छलफलमा के भयो ?
तीन घण्टा लामो यी दुई नेताको छलफल पार्टी राजनीतिमा केन्द्रीत रहेको स्रोतको भनाई छ । पार्टीभित्र पछिल्लो समय आफ्नै ब्यक्तिगत स्वभाव, कार्यशैली र गुटका कारण प्रधानमन्त्री ओली एक्लिदै जान थालेका छन् । न उनको सम्बन्ध पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन सक्ने खालको बन्न सकेको छ न वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग नै समधुर छ । ओलीकै कार्यशैलीले अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको सम्बन्ध भने विकसित हुदै जान थालेको छ ।
नेकपाभित्र देखा परेका मुख्य तीन समुहका बीचको त्रिपक्षिय संर्घषमा दुई पक्ष एक ठाँउमा उभिए भने अर्काे पक्ष पार्टीमा निक्कै कमजोर बन्ने देखिन्छ । पछिल्लो चरण प्रचण्ड र नेपाल एकातिर र ओली एक्लै एकातिर देखिन पुगेका छन् ।
त्यो पनि राजनीतिक र सांगठनिक दुबै विषयमा देखिन थालेको मतभेदलाई लिएर । सरकारको आलोचनाको विषय त्यसमाथी छदैछन् । राजनीतिक वैचारिक क्षेत्रमा प्रख्खर नेता भुषालसँग ओलीले माओवादीसँगको एकीकरण पछिको वैचारिक राजनीतिक वहस अब प्रारम्भ हुने र त्यसका लागि शसक्त वैचारिक धार निर्माण गर्न पर्ने भन्दै भुषाललाई वालुवाटार निम्ताईएको स्रोतको जिकिर छ ।
ओलीले त्यसका लागि आफु नजिक रहेर भुषाललाई वैचारिक वहस आरम्भ गर्न र नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई पनि आफुहरुसँगै मिलेर जानका लागि मध्यस्थताका लागि भूमिका खेल्न भुषाललाई वालुवाटार बोलाएर आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
तर भुषालले भने प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो आग्रहमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन । झण्डै एक घण्टा त भुषालले ओलीका कुरा मात्र सुनेका थिए । त्यसपछि मात्र दुई नेताका बीचमा अन्र्तक्रियात्मक छलफल भएको भुषालले आफु निकट लाई बताएका छन् । तर यो भेटघाटपछि नेकपाभित्रको राजनीतिक परिघटनाका विषयमा भने अहिले नै ठम्याई हाल्न सक्ने अवस्था बनिसकेको भने छैन ।
१. कोरोना संक्रमितको सूचीमा भारत १० स्थानमा
२. कार्यालय जाँदा यसरी कम गर्न सकिन्छ कोरोना जोखिम
३. आज साढे पाँच बजे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने
४. भारतबाट आएका थिए बारामा आज भेटिएका २६ संक्रमित
५. कोरोना संक्रमितले अस्पतालमै मनाए इद
६. दुग्ध उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि सहुलियत दरको ऋण माग
७. चिततवन श्रव्यदृश्यमार्फत म्याद थप गर्न शुरु
८. प्रदेश २ मा एकै दिन ५४ जना संक्रमित थपिए
९. भारतमा अलपत्र परेका भन्छन् : आधा पेट खाएर बाँचेका छौँ, हाम्रो उद्धार होस् ?